कुन वेदमा के छ ? – Lokpati.com
पक्राउ अमेरिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेपाल प्रहरी नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार चितवन नेपाली काँग्रेस मृत्यु राशिफल
कुन वेदमा के छ ?
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Feb 14, 2020
काठमाडौं । चार वेद भनेर सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद र अथर्ववेदलाई बुझिन्छ । ऋग्वेदलाई सबैभन्दा पुरानो वेद मानिन्छ । ऋग्वेदको उपवेद धर्नुवेद हो । यसका गुरु विश्वामित्रलाई मानिन्छ । यसमा बढी प्रशंसा इन्द्रदेवको गरिएको छ । ऋग्वेदमा सरस्वती नदीको वर्णन गरिएको छ । ऋग्वेदमा ५ शाखा, १० मण्डल र १ हजार २८ ऋचा रहेका छन् ।
यर्जुवेदमा गायत्री मन्त्र उल्लेख गरिएको छ । यसलाई क्षेत्रिय वेद पनि भनिन्छ । यर्जुवेदलाई कुरुक्षेत्रमा गरिएको पाइन्छ । यर्जुवेदको उपवेद आयुर्वेद हो । यसका गुरु धन्वन्तरी हुन् । यर्जुवेदमा ४० अध्याय, १९ सय ७५ मन्त्र, कृष्ण र शुक्ल गरी दुईवटा शाखा रहेका छन् । यसमा रहेका यज्ञ प्रक्रियाका मन्त्र हुन् ।
सबैभन्दा सानो वेद सामवेद हो ।सामवेदको उपवेद गन्धर्ववेद हो । सामवेदका गुरु भरतमुनि हुन् । सामवेदबाट संगीतको उत्पति भएको हो । सामवेदका ३ शाखाहरु, ७५ ऋचाहरु छन् । सामवेदमा १८ सय २४ मन्त्रहरु रहेका छन् ।
अथर्ववेद वेदहरुमा नयाँ वेद भनिन्छ । अथर्ववेदलाई व्यापारिक वेद पनि भन्ने गरिन्छ । यसका गुरु भारद्धज हुन् । अथर्ववेदबाट अर्थशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, बास्तुकला, खगोल, दर्शन, चमत्कार विज्ञानको विकास भएको हो । यस वेदमा २० काण्ड र ५९८७ मन्त्र रहेका छन् । यसलाई ब्रह्म वेद पनि भनिन्छ ।
माता पत्नी बहिनी र पुत्रीलाई चार स्त्री भनेर चिनिन्छ ।चार युग भनेर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग भनेर बुझिन्छ । चार समय भन्नाले विहान, मध्यह्न, साझ र रातको समयलाई बुझिन्छ । चार अप्सरा भनेर उर्वशी, रंभा, मेनका र तिलोत्तमालाई चिनिन्छ । चार गुरु भनेर माता, पिता, शिक्षक र आध्यात्मिक गुरुलाई चिनिन्छ । चार प्राणीमा जलचर, थलचर, नभचर र उभयचरलाई बुझिन्छ ।
चार वर्ण भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी परापूर्व कालमा गरिएको जातीय विभाजनलाई बुझिन्छ । चार नीति भन्नाले साम, दाम, दंड, भेदलाई जनाउछ ।चार जीव भन्नाले अण्डज, पिंडल, स्वेदज र उद्भिजलाई चिनिन्छ ।चार वाणी भनेर ओमकार, अकार, उकार र मकारलाई बुभिलन्छ । चार आश्रममा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास पर्दछ । हिन्दु धर्ममा मनुय पुरुषार्थ प्राप्ति हो । चार पुरुषार्थभित्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर्दछन् ।
नेपाल विश्वमा १६ औं धर्म निरपक्ष राष्ट हो । विश्वकै ठूलो त्रिशुल दाको धारापानीमा रहेको छ । यो ८१ क्वीन्टल १३ किलोको रहेको छ । देवताका वैद्य अश्विनी कुमार हुन् । सूर्य र सन्ध्या घोडाघोडीको रुपमा वनविहार गर्दा अश्विनी कुमारको जन्म भएको हो । यी जुम्ल्याहा दाजुभाईको आयुर्वेदको क्षेत्रमा महत्व छ । सूर्यको रथ १२ घोडाले तान्दछ । बज्रगायत्रीमा २५ अक्षर रहेका छन् ।
विश्वकै अग्लो शिवको मूर्ति काभ्रेको साँगामा रहेको छ । जुन मूर्ति ४३ मिटर अग्लो रहेको छ । हिन्दु धर्मका छ शास्त्रहरु रहेका छन् । योगशास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जली हुन् । उत्तर मिमांस वा वेदान्तका प्रवर्तक व्यास हुन् । पूर्व मिमांसका प्रवर्तक जैमिनि हुन् । साख्य दर्शनका प्रवर्तक कपिल हुन् । न्याय शास्त्रका प्रर्वतक गौतम ऋषि हुन् ।वैशेषिक शास्त्रका प्रर्वतक कर्णाद हुन् ।
विश्वमा हिन्दु धर्म धेरै भएका देशहरु नेपाल पहिलो नम्मरमा पर्दछ । नेपालको कुल जनसंख्याको ८१. ३ प्रतिशत जनसंख्याले हिन्दु धर्म मान्दछन् । भारतमा ७९.८ प्रतिशत रहेको छ । मौरिससको कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत मानिसहरु हिन्दु धर्म मान्दछन् । फिजीका ३३ प्रतिशत मानिसहरु हिन्दु धर्म मान्ने गर्दछन् । युगानामा २८ प्रतिशत हिन्दुहरु रहेको पाइन्छ ।हिन्दु धर्ममा ८ प्रकारको विवाहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।